URiky Rick usekhathele ukuklwebhana kukaCassper no-AKA
OMREPHA abayinkukhu nempaka u-AKA noCassper Nyovest. Isithombe: Instagram
UMREPHA osemnkantshubomvu endimeni yomculo kuleli uRiky Rick uthi iyabagqilaza njengomrepha impi kaCassper Nyovest no-AKA abayinkukhu nempaka.
URiky Rick kuleli sonto ubhale ekhasini lakhe kuTwitter egxeka laba baculi ngokuqala phansi ukungcofana kwabo muva nje ngemuva kwezinyanga kubukeka kunokuthula phakathi kwabo.
Muva nje indaba isuswe yingxabano ka-AKA nomethuli wezinhlelo obuye abe ngusomabhizinisi, uSizwe Dhlomo, otshele lo mrepha kwezikabhoqo ukuthi akazi lutho ngebhizinisi kulandela ukunekela umhlaba ngokuholele ekupheleni kobudlelwano bakhe neReebok.
Ngemuva kokudelelana kukaSizwe no-AKA kuTwitter, kufakwe negama likaCassper phakathi ovele wathi ngelinye ilanga usazomfaka emgqeni u-AKA.
"Ningakhohliswa ukuphendula kwami ngomoya ophansi nizitshele ukuthi ngibuthaka. Ngiwumuntu ocabangayo ngaphambi kokwenza kodwa ngelinye ilanga ngiyolithola ithuba lokufaka le ntwana emgqeni ngendlela efanele," kusho uCassper.
Lo mrepha uthe igama asezakhele lona nobudlelwano asebakhile endimeni yomculo kuleli kuyamqanda ukuthi aziphathe ngendlela engabhidliza wonke umsebenzi asewenzile ukufinyelela lapho akhona namhlanje.
Ephawula ngalolu daba kuTwitter uRiky Rick uthe sebekhathale ukungcofana kukaCassper no-AKA noma abantu bekujabulela ezinkundleni zokuxhumana.
"Angihambisani nendlela u-AKA ahlasele ngayo uCassper ngoba ngisho singasezwani kangako, ngisamthanda yena nomndeni wakhe nabantu asebenza nabo," kuchaza uMakhado.
Uthe ngesikhathi beqala phansi ukuxabana emasontweni edlule, wamfonela u-AKA emkhuza kodwa wangabhala ngakho ezinkundleni zokuxhumana ukuze kungabi sengathi kukhona amesekayo phakathi kwabo.
"Impilo yangempela lena kimina, akuwona umdlalo webhola lapho okhetha khona iqembu olesekayo. Ayikho into engifisa ukuyibona njengokuthelelana amanzi phakathi kwabo bobabili ukuze sizosebenzisana sonke ekukhuliseni lo mculo."
Riky Rick chopping about the Sizwe and AKA situation. pic.twitter.com/rvrehMSF9f